Fampiharana 10 tsy maintsy ananana mpaka sary | Famoronana an-tserasera
Androany dia misy ny fampiharana ho an'ny zavatra rehetra. Miaraka amin'ny finday avo lenta androany ianao dia afaka manao saika ny zava-drehetra ary amin'ny sehatry ny famolavolana dia tsy ho hafa io. Misy programa tena tsara izay ampiasaina hanovana sary, horonan-tsary, hikajiana ireo mason-tsary ... Ary miaraka amin'ny fivoarana goavana izay entin'ireo fakantsary amin'ireo terminal ireo (Sony Xperia Z2 dia nampiditra ny Teknolojia 4K amin'ny fakan-tsarin'ny fitaovanao), mahaliana kokoa ny mahafantatra ireo fitaovana tokony hiaraha-miasa amin'izy ireo.
Izany no antony namerenako ny folo amin'izy ireo izay afaka manampy anao amin'ny andavanandronao amin'ny maha mpaka sary azy. Eto ianao dia manana andian-programa tsy mety diso ho an'ny PC sy finday ho an'ny taranaka manaraka, izay azo antoka fa hamonjy antsika amin'ny olana amin'ny fotoana iray hafa. Tsy mbola fantatrao ve izy ireo?
Adobe Photoshop: Io ilay programa par excéliciement. Raha mbola tsy fantatrao izy ... Loza, na dia tsy tara loatra aza raha tsara ny fahasambarana. Miaraka aminy ianao dia afaka mamorona montage sy kompositions matihanina tanteraka. Raha ny marina, izy no programa ampiasaina indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny famolavolana sary.
Adobe Photoshop Lightroom: Natao manokana ho an'ny mpaka sary matihanina ity fampiharana ity. Manampy antsika indrindra amin'ny fandaminana ny sary izany, indrindra amin'ny lahasa fijerena, fanovana ary fitantanana sary nomerika ao anatin'izany ny kopian'ny backup amin'ny DVD.
Adobe Bridge: Ny asany dia fandaminana. Anisan'ireo tanjany ny fanovana anarana, ny fahaizana manasokajy ireo sary amin'ny fampiasana marika miloko na naoty kintana ho an'ny sary.
Lightin Diagram Mpamorona: Izy io dia fitaovana fandrindrana tena tsara ho an'ny fotoam-pivarotanay studio. Izy io dia ahafahantsika manamboatra kisarisary hametrahana jiro, taratra ary ireo kojakoja rehetra ananantsika.
Metatra hazavana am-paosy: Ny fotometatra dia ilay fitaovana izay misy fiasan'ny jiro fandrefesana. Matetika ny fakantsary dia misy iray mitambatra, fa imbetsaka izany dia tsy ampy ka mahaliana ny mampiasa fitaovana ivelany. Raha tsy manana ianao dia afaka manampy anao betsaka ity rindranasa ity ary tena tsotra ny fandidiana azy.
Dropbox: Mamela ny rakitra avy amin'ny solosaina samihafa hotehirizina ao anaty fampirimana iray ihany, manome antsika filaminana sy hakingana. Misy maody premium ary iray maimaim-poana. Android, Windows Phone, Blackberry na IOS koa misy.
Instagram: Ity rindranasa ity dia manampy anay hizara sary (ary na ny horonan-tsary aza) amin'ireo mpampiasa hafa amin'ny tambajotra sosialy toa ny Facebook, Tumblr, Flickr ary Twitter. Manolotra fitaovana fanovana sary koa izy io. Tena soso-kevitra izany.
Adobe Photoshop Express: Izy no zandrin'i Photoshop, namboarina ho an'ny smartphone. Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mampihatra vokatra isan-karazany miaraka amin'ny valiny mahavariana sy amin'ny fomba tena tsotra.
PhotoBuddy: Ity firavaka ity dia hanampy antsika hanamboatra singa tena mahaliana amin'ny fakan-tsarin'ny Smartphone. Avy amin'ny halalin'ny saha, fampahafantarana, HDR ... ambany dia ambany ny vidiny
Dof Calculator: Io dia hahafahantsika manisa ny halalin'ny saha mihevitra ny halavan'ny fotony, ny fiakaran'ny diaphragm ary ny elanelana misy eo amin'ilay lohahevitra halaina sary. Azo alaina ho an'ny Android sy IOS izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fampiharana 10 tsy maintsy ananana ho an'ny mpaka sary